A ga - enwe oge 2 nke World Dị ka Jeff Goldblum si kwuo? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Accordingwa dị ka jeff goldblum si dị - azịza ga-ekwe omume
Accordingwa dị ka jeff goldblum si dị - azịza ga-ekwe omume
A ga - enwe oge 2 nke World Dị ka Jeff Goldblum si kwuo?
IheWorld Dị ka Jeff Goldblum si kwuobụ usoro ihe nkiri 2019 nke American na-agbanye usoro telivishọn gosipụtaraJeff Goldblumgụgharia na Disney + site na Nọvemba 12, 2019. Na Jenụwarị 17, 2020, usoro ahụ megharịrị ọhụrụ maka anke abụọ ogenaganwere oge iri.
Kedu ihe bụ echiche ụwa dị ka Jeff Goldblum si kwuo?
IheWorld Dị ka Jeff Goldblum si kwuona-egosipụta “agụụ m maka inwe obi onwe onye nanị na-agwakọta ya na ndị ezigbo mmadụ,”Goldblumna-ekwu, “kama ịbụ ihe ọkọlọtọ ebe m na-abanye n'ime ụlọ ihe nkiri ma gụọ ihe teleprompter.”Ọgọst 20 2020
Ndi ụwa dị ka Jeff Goldblum si dee?
Ọ naghị adị ya ma ọlịEdemede, ọbụna mgbe anyị nụrụJeffpithy Voice overs, dị ka mgbe ọ kpọrọ Adidas onye mmebe 'onye iro ọhụrụ m' mgbe onye mmebe kpọrọ ya 'bopper.12 nke Dec 2019
Kedu ọwa bụ ụwa dị ka Jeff Goldblum si kwuo?
Worldwa Dị ka Jeff Goldblum si kwuo/Channels
Ego ole ka Jeff Goldblum bara?
N'ihe banyere 2021,Jeff Goldblumagbakọbawo ụgbụkwesịrịnke $ 45 Nde. O nwetawo ọtụtụ n'ime ego ọ na-enweta site na ọrụ ya na-eme ihe nkiri na usoro TV.Mar 28 2021
Ọnye na-bụ Jeff Goldblum nwunye?
Jeff Goldblum, 68, na nwunye ya na-enwe mgbedeEmilie Livingston, 38, na ụmụ ha Charlie, 5, na River, 4, ka ha na-eme Daybọchị Ndị Nne. Ọ lụrụ di na nwunye nke obi ụtọEmilie Livingstonkemgbe 2014.Ọnwa Ise 9, 2021
Bụ ụwa dị ka Jeff Goldblum maka ụmụaka?
Agum akwukwo ma dikwa nma!
Ezigbo ihe ndekọ. Ọ na-akụziụmụakaọtụtụ ihe banyere ihe ha na-amaghị n'ezie nke ọma, na-egosi na site na frontlines nke a ọchịchọ ịmata nwoke.
Kedu oge ọdịiche dị n'etiti Jeff Goldblum na nwunye ya?
Oge Afọ: 38 afọ
Onye na-eme ihe nkiriJeff Goldblum na yajimnazumnwunye, Emilie Livings, nwere afọ iri atọnkeiheọdịiche afọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndepụta anyị. Ma di na nwunye ahụ na-agbasi ike, na-ekekọta eriri na 2014 ma na-eme ọtụtụ ọhụụ kapeeti na-acha uhie uhie kemgbe.Ọnwa Isii 28. 2021
Afọ ole ka Jeff Goldblum?
10 Ọ Bụ YaAfọ 68 Afọ
Jeffrey Lynn Goldblum mụrụ na October 22nd nke 1952, na West Homestead, Pennsylvania.
Ogologo afọ ole ka ọ dị mma?
Iwu a na-ekwu na site n'ịkesa nke gịafọsite na abụọ wee gbakwunye asaa ị nwere ike ịchọta ọha mmadụanabataopekempeafọnke onye ọ bụla ị chọrọ ịlụ. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ 24 afọ, ị nwere ike ịnwe ike ịnọnyere onye ọ bụla dịkarịa ala 19 (12 + 7) mana ọ bụghị onye bụ 18.Ọnwa Ise 2, 2014
Kedu ọdịiche dị afọ buru oke ibu?
Mmekọrịtaọdịiche afọ buru ibukarịa afọ 10 na-abịakarị n'usoro nke ya. 'Ọ bụ ezie na iwu anaghị adị mgbe niile, ezigbo iwu ị ga-echeta bụ na mkpakọrịta nwoke na nwanyị ihe karịrị 10 afọ ga-eweta nsogbu ugbu a ma ọ bụ mgbe e mesịrị nke na-agbakwunye nsogbu ịma aka ọ bụla mmekọrịta ọ bụla nwere,' ka ọ na-ekwu.June 27. Dec 2019
Kedu mgbe ụwa dị ka ikuku Jeff Goldblum si dị?
Worldwa Dabere na Jeff Goldblum bụ usoro ihe nkiri American Indian na-agbasa na 2019 nke Jeff Goldblum gosipụtara na Disney + site na November 12, 2019. Na Jenụwarị 17, 2020, e megharịrị usoro ahụ maka oge nke abụọ nke ga-enwe usoro iri.
Gịnị ka Jeff Goldblum mere maka ndụ?
N'oge eserese, Jeff Goldblum nyochara obere obere ka o kwere omume na isiokwu ndị a na-ewebata na ngosi ahụ. Ọ na-enyocha ọtụtụ ngwaahịa gụnyere sneakers, ice creams, tattoos na ịnyịnya ígwè.
Ihe ngosi National Geographic ọhụrụ ọ bụ banyere Goldblum?
Usoro akwukwo nke Goldblum na-eweghachite ihe nkpuchi na ihe yiri nke oma iji kpughee uwa nke njikọ di egwu, sayensị na-adọrọ mmasị, na ọtụtụ nnukwu echiche. Ị maara? A mara ọkwa ngosi ahụ dịka akụkụ nke ngosipụta National Geographic na ndị na-achụ ego Disney na-ezute Eprel 11, 2019 maka Disney +. Hụkwuo »
okporo ụzọ ịnyịnya ígwè
Okporo ụzọ ịnyịnya ígwè - azịza dị mfe maka ajụjụ
Bikgba igwe n’okporo ụzọ adịghị mma?
igwe breeki igwe kwụ otu ebe
Igwe igwe kwụ ọtọ - ihe ngwọta ga-ekwe omume
Enwere igwe brek ịnyịnya ígwè ka mma? Nsonye nke diski breeki na pro peloton pụtara na a na-eme ka okpokoro igwe ọhụụ dị njikere. Diski brek na enye ohere maka ikwuputa braku nke ọma, na eme ka mkpọchi ụkwụ na-erughi. Diski brek na-arụ ọrụ karịa rim brek na mmiri ihu igwe. Agbanwe agbanwe rotor nha-enye gị ohere ịgbanwe otú ihe braking ike ị chọrọ.
Omenala igwe - otu esi edozi
Gịnị mere anyị ji kwesị ịzụlite ịgba ịnyịnya ígwè? Omenala ịgba ịnyịnya ígwè nke obodo mepere emepe bụ ngwa dị ike maka iwulite obodo na-adigide, nke siri ike, na nke ziri ezi Ọkpụkpụ igwe maka obodo na ụmụ amaala gafere njem, egwuregwu, na egwuregwu.
carbon eriri igwe
Carbon fiber igwe - otu esi edozi
Ndị na-agba ịnyịnya carbon na-aba uru? Mana n'agbanyeghị na ọ dị ọnụ ala karịa oge ọ bụla, eriri carbon ka dị oke ọnụ karịa ọtụtụ aluminom na nchara ndị ọzọ. Ya mere, maka ndị na-achọ igwe kwụ otu ebe na-emerụ ihe ọ bụla dị arọ, nzaghachi ma ọ bụ ịrụ ọrụ, mgbe ahụ ee, carbon fiber ga-abụ nhọrọ kachasị mma n'ọtụtụ ọnọdụ. 15 ọzọ. 2016 г.
fechaa ịnyịnya ígwè
Igwe na-agba ịnyịnya ígwè fechaa - obere akwụkwọ
Wheelsgbọ ịnyịnya ígwè dị mfe ọ ọsọ? Agbanye ntụgharị na-abata naanị n'ime oge mmepe ma ọ bụ de-accelerations. Igwe na-agba ọkụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, mana ha na-agbadata ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere wiil ndị dị arọ, nke na-agba ọsọ ngwa ngwa mana ọ na-agba ọsọ ọsọ karịa. 30.11.2020
Otutu igwe - otu esi ekpebi
Gini ka eji akpo igwe mmadu 3? Tandems nwere ike ịnwe karịa abụọ ndị na-agba ịnyịnya na-ezo aka na nhazi nke ndị na-agba ịnyịnya otu n'azụ karịa ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya. A na-akpọ ịnyịnya ígwè maka ndị na-agba ịnyịnya atọ, anọ, ma ọ bụ ise dị ka 'atọ' ma ọ bụ 'atọ', 'quads' ma ọ bụ 'quadruplets', na 'quints' ma ọ bụ 'quintuplets' n'otu n'otu.